China L-valine CAS 72-18-4 Ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy grade Food (AJI USP) | Honray
Anaran'ny vokatra ：: L-Valine
L-Valine (Fanafohezana Val) dia iray amin'ireo asidra amine 18 iraisana, ary iray amin'ireo asidra amine tena ilaina valo ao amin'ny vatan'olombelona. Izy io dia antsoina hoe asidra amine branched chain (BCAA) miaraka amin'ny L-Leucine sy L-Isoleucine miaraka satria izy rehetra dia misy rojom-by methyl ao amin'ny rafitry ny molekiola.
Ny L-Valine dia iray amin'ireo asidra amine alifatika amin'ireo karazana asidra amine proteinogenika roapolo sy asidra amine amina manga (BCAA) izay tsy azon'ny biby atao ny mamolavola azy io ary tsy maintsy mihinana avy amin'ny sakafo hanina amin'ny filan-tsakafo; noho izany ny L-valine dia asidra amine tena ilaina. Vokany lehibe toy izao manaraka izao:
(1) Nampidirina tamin'ny sakafon'ny lactations izay mitombo ny vokatra amin'ny ronono. Ny mekanisma dia ny L-Valine dia mety hisy fiantraikany amin'ny famokarana alanine sy famotsorana hozatra, ary ny alanine vaovao azo avy amin'ny lactations 'plasma dia manampy ny tavy hozatra hanitsy ny tinady ho an'ny akora glucose ary avy eo dia miakatra ny vokatra azo avy amin'ny ronono.
(2) Fanatsarana ny hery fiarovan'ny biby. Ny L-Valine dia afaka mandrisika ny taolam-biby T sela hiova ho sela T matotra. Ny tsy fahampian'ny valine dia mampihena ny haavon'ny C3 sy ny transferritin, manelingelina ny fitomboan'ny thymus sy ny tavy lymphoid peripheral ary miteraka fihenan'ny sela sela fotsy sy tsy miandany. Vantany vao tsy misy valine ianao, ny zana-borona dia hitondra fihetsiketsehana miadana kokoa sy tsy mihena amin'ny fanoherana ny otrikaretina Newcastle.
(3) Misy fiantraikany amin'ny haavon'ny endocrine biby. Ny fanadihadiana dia naneho fa ny mamafy lactating sy ny sakafon'ny voalavo mampinono amin'ny L-valine dia mety hampitombo ny fatran'ny prolactin sy ny hormone mitombo ao amin'ny plasmas-ny.
(4) Ilaina koa ny L-valine amin'ny tanjon'ny fanamboarana sy famerenana amin'ny laoniny ny sela. Izy io dia antsoina hoe asidra amainty rojo vy na BCAA, izay miasa miaraka amina BCAA roa fanampiny fantatra amin'ny anarana hoe L-Leucine sy L-Isoleucine.
Previous: L-Tryptophan CAS 73-22-3 ho an'ny sokajy Pharma (USP)
Manaraka: L-Leucine CAS 61-90-5 Ho an'ny kilasy sakafo (AJI USP)
L-Threonine CAS 72-19-5 ho an'ny kilasy sakafo (FCC / AJI / ...
L-Isoleucine CAS 73-32-5 Ho an'ny kilasy sakafo (AJI USP ...
L-Lysine HCL CAS 657-27-2 ho an'ny kilasy sakafo (FCC / AJ ...
L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm, Sakafo biby, 73-32-5 L-Isoleucine, Farm kilasy L-Leucine, Kilasy Sakafo L-Threonine,